China Black Door Handle Lock ho an'ny fanamboarana efitrano sy trano ho an'ny ankizy | YALIS
Lock Black Lockle Lock ho an'ny efitrano ho an'ny ankizy
Fitaovana: firaka zinc
Hatevin'ny varavarana: 38-50mm
Famaranana mahazatra: mainty matt
Ho an'ny fianakaviana dia toerana fampiasa matetika ny trano fandroana. Na izany aza, ny trano fandroana ihany koa no faritra tena iharan'ny lozam-pifamoivoizana, ary indraindray ny lozam-pifamoivoizana toy ny fianjerana sy fikotrokotroka. Ny mpianakavy (indrindra ny ankizy sy ny be antitra) mihidy tsy nahy ao amin'ny trano fidiovana, matetika dia atahorana ho voaro.
Amin'ny fomba fijery maha-olombelona, ​​ny fikarakaran'ny YALIS hatramin'ny mararin'ny mpanjifa rehetra akaiky, manaraka ny filan'ny tsena, ary mandefa andiana hidin-trano varavarana fandroana vaovao. Ny hidin-tranon'akanjo varavarana fandroana dia azo sokafana mora foana avy any ivelany hisorohana ny olana toy ny zokiolona sy ny ankizy misosososo sy mianjera ao amin'ny fandroana ary tsy afaka mamonjy azy ireo ara-potoana. YALIS hidin-trano varavarana fidiovana hidin-trano dia hanandrana fotoana bebe kokoa hiarovana ny fianakavianao.
Avy amin'ny fisafidianana fitaovana, asa tanana, fifehezana kalitao ary serivisy aorian'ny fivarotana, dia miezaka izahay mba ho tonga lafatra. Ny tanjon'ny YALIS dia ny hanomezana vahaolana ho an'ny mpanjifa amina vahaolana tsotra sy tsotra ary tonga lafatra. Amin'ny 2021, YALIS dia hanohy handray ny "fahamendrehana sy ny fanavaozana" ho ivon'ny orinasa, hanohy hampitombo ny fanavaozana, ary hitondra ny vavahady YALIS manerana ny tany hanompoany mpanjifa an'arivony.
Teo aloha: Lock Black Lock momba ny varavarana tsy mitia zaza
Manaraka: Ankizy fiarovana varavarana fiarovana ho an'ny zaza efitrano
Tanana varavarana fandroana
Fitaovana fanidiana fandroana fandroana
Fandraisana an-tànana varavarana tsiambaratelo
Kitapo varavarana fandroana
Fanidiana hidin-trano Chrome Standard Door
Tanana am-baravarana tsy azo zakan-jaza miaraka amin'ny hidy fehikibo
Tanana mainty boribory momba ny fiarovana ny zaza amin'ny hidin-trano
Lock Black Lock momba ny varavarana tsy mitia zaza
Fandraisana momba ny varavarana manokana momba ny varavarana ho an'ny varavarana fandroana